ဒုက္ခသည်များကို ကော်မတီဖွဲ့ လက်ခံရန် စီစဉ်နေ | ဧရာဝတီ
ဒုက္ခသည်များကို ကော်မတီဖွဲ့ လက်ခံရန် စီစဉ်နေ
လင်းသန့်| February 21, 2013 | Hits:5,579
| | အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းတွင် တွေ့ရသော ဒုက္ခသည် ကလေးငယ် နှစ်ဦး (ဓာတ်ပုံ – လင်းသန့် / ဧရာဝတီ)
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တလျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးအတွက် မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ကော်မတီဖွဲ့၍ လက်ခံရန် စီစဉ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ထိုင်း အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက နိုင်ငံတကာမှ အကူအညီပေးနေသည့် အဖွဲ့များဖြင့် ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်ပို့ဆောင်နိုင်ရေး စတင် ဆွေးနွေးနေကြောင်း သိရသည်။
ယမန်နေ့က ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် မဲဆောက်မြို့၌ ကျင်းပသော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံဘက်က ဒုက္ခသည် လက်ခံရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း စီစဉ်နေသည်ဟု တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ပြောကြားကြောင်းလည်း ဘီဘီစီ သတင်း တပုဒ် တွင် ဖော်ပြထားသည်။
သို့သော် မြန်မာ ဒုက္ခသည်များ လက်ခံရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိပ်ကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။
ထိုင်းဘက်က မြန်မာဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့ချင်နေကြောင်း၊ လတ်တလော အခြေအနေသည် ဒုက္ခသည်များ၏ လုံခြုံ စိတ်ချရသည့် ဘ၀ ရပ်တည်မှု အခြေအနေ မရှိသေးကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကွန်ရက် (NDD) မှ သုတေသန တာဝန်ခံ ဦးစိုင်းမြင့်သူ က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
“ဒီအခြေအနေမှာတော့ ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကျနော်လက်မခံနိုင်ပါဘူး”ဟု သူက ဆိုသည်။
အထူးသဖြင့် တိုင်းရင်သား ဒေသများတွင် စစ်ပွဲများကြောင့် ထိုင်း နယ်မြေ၌ ဒုက္ခသည်များ ခိုလှုံနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ပြန် သွားမည့် ဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် ဘ၀ လုံခြုံမှုရှိသော အနေအထားသို့ ရောက်ရန် ယခုကာလသည် အစကနဦးသာဖြစ်သေး ၍ ပြန်နိုင်သည့် အခြေအနေမရှိသေးကြောင်း ဦစိုင်းမြင့်သူက ဆက်ပြောသည်။
တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကလည်း ထိုကဲ့သို့ မြန်မာဒုက္ခသည်များ နေရပ်ရင်း ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် အနည်းဆုံး အချိန် ၂ နှစ် မှ ၃ နှစ်အထိ ယူရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုထားသည်။
“လောလောဆယ်ကတော့ မိုင်းမရှင်းသေးတဲ့ ဧရိယာတွေ၊ နောက် သေနတ်သံ မစဲသေးတဲ့ ဧရိယာတွေ ဒီလိုမျိုးတွေ ဖြစ်နေ တဲ့ အခါကျတော့ ဒုက္ခသည်တွေအနေနဲ့ သူတို့ဘ၀ လုံခြုံဖို့၊ စားဝတ်နေရေးပြေလည်ဖို့ရယ်၊ တဆက်တည်းပါ လာမယ့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍတွေမှာ စောင့်ရှောက်မှု စနစ်စတာတွေအပေါ်မှာ အများကြီး မူတည်ပါတယ်”ဟု ဦးစိုင်းမြင့်သူ က ပြောဆိုသည်။
မြန်မာဒုက္ခသည်လက်ခံရေး ကော်မတီအနေဖြင့် နေရပ်ရင်းပြန်လည် အခြေချနေထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် နေရာ နှင့် လယ်မြေ ၁၀ ဧက ချပေးရေး ပါဝင်သည်ဟု သိရကြောင်း တာ့ခ်ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် တတိယနိုင်ငံများသို့ သွားရောက်အခြေချလိုသူများကိုလည်း ထိုင်းနိုင်ငံဘက်က ဆက်လက်ဆောင် ရွက်ပေး သွားမည့် အစီအစဉ်ရှိကြောင်း၊ သို့သော် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် နေထိုင်လိုသူများအတွက် လက်ခံပေးရန် အစီအစဉ် မရှိကြောင်း တာ့ခ် ခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဒုက္ခသည်များက နိုင်ငံရေး၊ စစ်ဘေး၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များကြောင့် ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်လာသူများ ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး အရ ထွက်ပြေးလာကြသူများက မြန်မာနိုင်ငံကို မပြန်လိုတော့ဘဲ တတိယနိုင်ငံတခုခုတွင် အခြေချနေ ထိုင်လိုကြကြောင်း ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နို့ဖိုး ဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဆရာတော် ဦးသူရိယက ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ရင်ပြန်ရန်အတွက် နေစရာ မြေ၊ အိမ်၊ ရွာတို့ မရှိတော့ ကြောင်း၊ စစ်မှန်သည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှု မရှိသေးဘဲ ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံအေးချမ်းစွာနေရပ်ပြန်ရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း မိန့်ကြားသည်။
“ဘုန်းဘုန်းကတော့ ပြောချင်တာက စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရမှ ဒုက္ခသည်တွေအတွက် လုံခြုံစိတ်ချရမယ်လို့ ထင်တယ်။ အခုထိ ဘာအာမခံချက်မှ မရှိသေးဘူး”ဟု ဦးသူရိယက မိန့်ဆိုသည်။
အုန်းပြန့် ဒုက္ခသည်စခန်းက ကိုတရုတ်ကြီးကလည်း“အခု အစိုးရက ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ကြား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ မယုံကြည်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာကိုလည်း သူတို့ ပြောသမျှ မယုံကြည်ဖို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ တတိယနိုင်ငံ တခုခုမှာပဲ သွားရောက် အခြေချ နေထိုင်ချင်ပါတော့တယ်”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်များက မြန်မာနိုင်ငံပြန်သွားလိုသူ အလွန်နည်းပါးပြီး အများစုမှာ တတိယနိုင်ငံ တခုခုတွင်သာ အခြေချ နေထိုင်လိုကြ၍ တချို့ကလည်း ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တရားဝင် နေထိုင်လိုသူ များလည်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကရင်ဒုက္ခသည်ရေးရာ ကော်မတီမှ တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်သည့် ဦးရောဘတ်ထွေး ကလည်း“ကျနော် သိရသလောက်တော့ ဒီအချိန် မပြန်ရဲသေးဘူး၊ ဘာမှ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း သေချာ မရှိသေးဘူးလေ”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ် တလျှောက်ရှိ ဒုက္ခသည် စခန်း ၉ ခုတွင် ဒုက္ခသည်ပေါင်း ၁ သိန်းခွဲခန့်ရှိရာ တတိယနိုင်ငံတွင် ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူ ဒုက္ခသည် စုစုပေါင်း ၈၄၉၀၀ ကို မှတ်ပုံတင် စာရင်းသွင်းပြီးသော်လည်း ခန့်မှန်းခြေ ၆၂၀၀၀ ခန့်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ အတည်ပြုချက် မရသေး၍ မှတ်ပုံတင်စာရင်း မသွင်းရသေးကြောင်း ထိုင်း အခြေစိုက် ကုလ သမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး(UNHCR) ၏ စာရင်းအရ သိရသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများရှိ ဒုက္ခသည်များသည် လတ်တလော အခြေအနေအရလည်း အခက်အခဲများစွာနှင့် ကြုံတွေ့ နေကြရကြောင်း၊ တတိယနိုင်ငံ အခြေချရေး အပါအ၀င် စားဝတ်နေရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ မိသားစု ပြန်လည် ပေါင်းစည်းရေး စသည့် ကဏ္ဍ များတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေကြကြောင်း ဒုက္ခသည်များက ပြောသည်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ မြန်မာ ဒုက္ခသည်စခန်းများ အမိုးအကာအခက်အခဲ ကြုံနေရKIO ထိန်းချုပ်ရာ ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများ စားနပ်ရိက္ခာ လိုအပ်ဒုက္ခသည်များကို ပြန်ပို့ရန် ထိုင်းအစိုးရ အစီအစဉ် မရှိသေးတန့်ယန်း စစ်ဘေးရှောင် ရှမ်း ဒုက္ခသည်များ နေရပ်ပြန်ပို့မုန်တိုင်းအကြို ရခိုင်ပြည် ဒုက္ခသည်များ ပြောင်းရွှေ့ နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Shwe Thway February 21, 2013 - 11:45 am	Actually, Thailand is benefiting from Burmese refugees. UN and many organizations are spending millions of dollars in Thailand for these refugees. Among millions, some go to the Thai government and the Thai people who work for UN and the said organizations. At the same time, the Thai businesses are getting cheap laborers from the Burmese people who are in the border area. So, sending the refugees back to Burma will hurt Thailand too.
Reply	ွှTheingi Tun February 21, 2013 - 5:28 pm	ဒုက္ခသည်တွေအမြန်ဆုံးမိသားစုချင်းပေါင်းစည်းနိုင်ပြီးနေရပ်ကိုပြန်နိုင်ကြပါစေ။
Reply	Shwe Hninsi February 22, 2013 - 10:24 am	How about the refugees whose family members are already in third countires, Ma Theingi?
Reply	san min February 25, 2013 - 10:25 am	in my point of view , than shwe is better than thein sein…. people died andalot of people got into trouble because of than shwe but millions of burmese people can go to third countries and now they are rich as much as the generals in third countries … forapoor country like burma to go and settle in third country is justadream but because of than shwealof ot burmese people and generations lives are changed because of than shwe …. in the long term than shwe benefitted burma than thein sein …. than shwe also did the crimes cos he is justaperson from the jungle as he dont know the hoax and the manoevuer of the overseas politicians … they spreadalot of hoax and they made up some silly and wicked stories to make stupid than shwe crazy …. thein sein not stupid but he not benefitted the burma … now refugees are in trouble …. we miss than shwe whatever !!! for me i dont hate u than shwe … long life !!!
Reply	soe win February 26, 2013 - 9:57 am	i knowalot of overseas politicians are corrupted … their mouth is like prostitutes … they talked nonsense words to fight people with each other ……. they just wanna see people get into trouble …. people should stay away from them… their mind is very low standard …. they just care about how to get support from un and usa … they r just beggars … they will do anything to get money and support … they are ready to make someone to get into trouble for their self …….